QODOBBADA WAXTARKA LEH EE MULBERRY, CUNTADA UGU FIICAN EE DAAWADA DHAQAMEED - BEERTA
Mulberry (Moraceae) - dhirta ka mid ah caleenta Mulberry (waxaa caan loo yiqiin "geedo buulo", geedku wuxuu gaari karaa dherer 20 mitir). Cudurkaan waxaa ku jira in ka badan 17 subax oo dhir ah oo guryahooda yaryar ay yihiin Persia.
Waa sahlan tahay in la aqoonsado dhuxul: waxa uu leeyahay caleemo calsan, u egtahay lakabyo, iyo berry oo u eg sida madow. Warshadkan, ee ku taala dhulkayaga, waxay ku kori doonaan laba nooc: oo leh furuto cad iyo ku dhowaad madow. Miraha dufanka badanaa waa kuwo fareesh ah oo ballaadhan.
Waxaan ka hadli doonaa mulberry iyo hantida ee qodobkan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ku bilowdo ugu wanaagsan - dhadhanka geed geedka. Mulberry waa dhexdhexaad macaan iyo dhanaan, mana aha wax tartiib tartiib ah, maaddaama ay inta badan yiraahdaan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa diyaarinta noocyada kala duwan ee jellies, sharoobada iyo murgeysiinta wax lagu dubo.
Sidoo kale, tufaaxa, dhadhanka, waxay ku dhex jirtaa isugeynta suunka hilibka (oo loo isticmaalo sida Maraqa) iyo xitaa loo isticmaalo karinta maraqyada, laakiin waxaan ka hadli doonaa tan danbe.
Faa'iidooyinka caafimaadka ee bukaanshaha badanaa waxay ku jirtaa berry, inkastoo caleemaha iyo caleemaha ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daawada dhaqanka, farshaxanka iyo kiknoolajiyada.
Miraha Mulberry waxaa ku jira sonkor badan, glucose, fructose, oo sidaas daraaddeed ma aha oo kaliya xoojinta, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysataa dheefshiidka wanaagsan iyo dedejinta metabolismka.
Sidoo kale, bukaanshuhu wuxuu leeyahay sifooyin caawiya xoojinta lafaha, ilkaha, ciddiyaha iyo timaha, sababtoo ah joogitaanka potassium, magnesium iyo calcium.
Ma taqaanaa? Mulberry saliida lagama maarmaanka u yahay mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan ee warshadaha qurxinta.
Botanisto badan ayaa ku adkaysanaya in tufaaxu ma aha oo kaliya guryaha hantida leh, laakiin sidoo kale contraindications, taas oo aan ka hadli doonaa wax dambe. Laakiin, inkastoo xaqiiqda ah in ra'yigu kala duwan yihiin, dhadhanka dhuxul wuxuu noo farxiyaa oo xasuusiyaa caruurnimada.
Waa maxay faa'iidooyinka caleemaha dhogorta ah
Mulberry, ama halkii caleen ah ee bukaa iyo sifooyinka bogsashada, waa mid aad u caan ah taageerayaasha daawada dhaqameed. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ku dhufatid shaah mulberry ah farmashiyaha, waa inaad ogtahay ma aha oo kaliya waxtarrada, laakiin sidoo kale waxyeellada ay u geysan karto caafimaadkaaga.
Inta badan dhirta yaryar waxay ogyihiin mulberry sida daaweyn wanaagsan oo la xiriira dagaalka ka dhanka ah sokorowga, iyo sidoo kale daaweynta dhibaatooyinka beerka iyo kelyaha, maskaxda wadnaha iyo yaraynta cadaadiska (wadnaha).
Laakiin, waxaa haboon in la ogaado in jirin geedisocod ah ku talinaysaa isticmaalka miraha kuwan sida habka kaliya ee saxda ah ee daaweynta cudurrada kor ku xusan.
Mulberry sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iido u leh daaweynta cunaha inta lagu jiro dhuunta dhuunta oo waxaa loo isticmaalaa sidii ficil ahaan.
Qaybaha geedaha qaarkood ayaa sidoo kale ka hadlaya xaqiiqda ah in mulberry uu yahay antiseptic aad u xoogan, iyo daaweynta nabarrada leh decoction wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku guuleysatid natiijooyin ka fiican isticmaalka tincture khamriga.
Waa muhiim!Marmarka qaarkood, takhaatiirta suufiyadu waxay kugula talinayaan isha, laakiin waxaad isticmaali kartaa oo keliya habkan marka aad hubto inaadan xasaasiyad ku lahayn dhirtaas.
Isticmaalka kalluunka boodada ee daawada dhaqameed
Faa'iidooyinka jilifada geedku waxay si toos ah ugu xiran yihiin xididdada bukaa, sifooyinka bogsashada. Badanaa, dhirta iyo takhaatiirta waxay isticmaalaan xididada si ay u sameeyaan decoctions for neefta gaaban, qufac, si loo yareeyo heerkulka, ka saaro sunta iyo dheecaanka xad-dhaafka ah jirka.
Caleenta geedkii tufaaxa, wakhtiyadii hore, waxaa loo isticmaalay in lagu diyaariyo boogta nabarka boogta. Hadda, dhakhaatiir badan oo wadnaha ku shaqeeya ayaa u jeestay daweyno barxada leh oo ku salaysan daweyn si loogu daweeyo dhiig-karka.
Si kastaba ha ahaatee, tufaaxu ma aha oo kaliya bogsiinta guryaha. Tusaale ahaan, ee Shiinaha, sababtoo ah waxay iska caabineysaa heerkulka kuleylaha, jilif baraf ah ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo warqad.
Geedkan waxa kale oo uu gacan ka geystay in "la mideeyo" bulshada bini-aadanka ee qadiimiga ah ee Shiinaha, isagoo noqday mid ka mid ah qalabka ugu caansan ee lagu sameeyo qalabka muusikada.
Ma taqaanaa? Qodobada loo isticmaalo in lagu sameeyo qalabka xargagaha leh waxaa laga gooyaa caarada barafka.
Sida loo soo saaro alaabta ceeriin ee caafimaadka
Si aad u bilowdo goynta qalabka daawada ka soo berry, jilif iyo caleemo of bukaa waa inuu ahaado xilliga ubax, ama Bisaylkiisa buuxa ee miraha. Miraha cusub iyo caleemaha waxa ku jira xubno waxtar badan oo faa'iido leh waxaana lagu shaqeynayaa si ka wanaagsan.
Way adag tahay in la qalajiyo miro yar yar, sidaa daraadeed habkan waa in la siiyaa fiiro gaar ah. Miro kulul oo ku fiican foornada, ama shooladda / dabka, tan iyo inta badan fangaska khamiirka ku nool yihiin geedo dhirta, taas oo, on habka dabiiciga ah ee qalajinta berry, muuqan maalinta labaad oo bilaabaan inay halsano.
Waa muhiim! Haddii aad wali tahay, berry qallalan, waxaad u isticmaali kartaa sida tincture of qufaca iyo daaweynta cudurrada viral. Bartamaha Aasiya, vodka mulberry waxaa laga sameeyaa noocan oo kale ah "berries".
Daaweynta xameetida leh dhuxul waxaa lagu sameeyaa caawimo caleemo ah oo la goosto dhammaan sanadka oo dhan.
Dalagyada alaabta ceeriin ah ee ka soo baxa caleemaha boodhka ma aha mid boodh ah oo uma baahna xaalado gaar ah. Waad qallajin kartaa caleemaha si kasta oo aad jeceshahay.
Roots Mulberry si fiican u sii haysan guryaha ay dawooyinka, haddii la goosto dayrta, marka geedka gasho wajiga "hurdo iyo nasasho." Xididku sida caadiga ah waa la qalajiyey, iyo sidoo kale, sida dusha mulberries, waxaa lagu meeleeyay baakad vacuum.
Sabab fiican oo aad ku soo ururin karto aqalkaaga miiska isku midka ah waa shaaha leh macaanka mulberry. Ha u maleyn in in foomka mulberry tufaax ah lumin doonaa hantida faa'iido leh. Qodobka loogu talagalay diyaarinta macaanka mulberry waa mid aad u fudud oo degdeg ah. Dhamaan waxaad u baahan tahay:
Biyo raaci adhiga iyo ku rid shukumaanka warqadaha.
Lakabyada ku shub midhaha iyo sonkorta baaquli dhaldhalaalka ah ama digsi.
Fasax ilaa 4-8 saacadood ilaa casiirka "la sii daayo".
Karkari kuleylka hooseeya ilaa sonkorta si dhammaystiran u kala diri, si joogta ah uga saari xumbada laga bilaabo macaanka.
Ka qaad kuleylka 30 ilaa 60 daqiiqo.
Ku dar qanjaruuji iyo karkari mar labaad saacad.
Cuntadani waxay ufiican tahay dhammaan dadka guriga ku nool, maadaama ay tahay hab fiican oo dhadhan fiican leh oo lagu daro fitamiinada qaar jirka ah.
Ma taqaanaa? Si aad u berry ee aad macaanka aad haysan qaabka, isku walaaqa saacadaha.
Aad dhadhan fiican leh, suufka ayaa soo baxaya sonkorta sharoobada. Cuntada wax lagu kariyo waa waqti yar, laakiin natiijadu waa u qalantaa.
Sidaas, si ay u kariyo dhirta ee sharoobada sonkorta, waxaanu u baahan doonaa miro, oo la dhaqay oo la kariyey (qasabaduhu ma shaqeyn doono, sababtoo ah waad dhaafi kartaa), kaas oo aan ku shubno sharoobada sonkorta (waxaad samayn kartaa nafaqo: 1.2 kiilo oo sonkor ah halkii 300 grams oo biyo ah, ama iibso sharoobada la diyaariyay).
Isku dar kulul waxaa la dhigaa daasadaha, kuwaas oo lagu daboolay warqad xajin leh oo lagu qooyay aalkolada (xadka wareega wareega ee warqadda waa inay u dhigantaa dhexroorka awoodda) kadibna si adag u xir xidho dabool.
Waa hagaag, waan ka wada hadalnay cuntooyinka "delicious", oo hadda waxaan ka wada hadli karnaa "faa'iido" cuntada cuntada lagu kariyo, taas oo kobcinaya alaabteeda oo kaliya.
Sidaas, kariimka koowaad iyo ugu caansan ee loogu talagalay diyaarinta daroogada daweynta ka soo: Shub 2 qaado oo ah caleemo (qalalan!) Mulberry leh galaas biyo ah.
Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa hargabka (oo wanaagsan oo loogu talagalay gargling), qalabkani sidoo kale waa duri oo kaa caawin doona in laga saaro dhammaan walxaha sunta ah ee jidhkaaga.
Qaxwaha Mulberry ayaa si guul leh loogu isticmaalaa hypertension, yaraynta cadaadiska.
Qodobka ugu muhiimsan ee gabdhaha: qaado 1 qaado oo ah xidid tufaax ah, ku dabool leh galaas biyo la karkariyey iyo cabitaan subaxdii calool madhan. Ka dib isticmaalka joogtada ah ee faleebo, caafimaad leh, laakiin miisaanka daciifsan ayaa la ilaalin doonaa.
Waa muhiim! Ma cuni kartid mulberry leh biyo aan la karinin, maadaama ay tani keeni karto in uu ku dhaco shuban iyo shuban.
Contraindications iyo waxyeelo qofka ciiraanka ah laguma talinayo
Fikradda ah in berry mulberry ay naftiisa ku dheehantahay oo kaliya wax dhib ah oo aan waxyeello lahayn. Marka hore, waa inaad marwalba xusuusataa taas Mulberry waa xasaasiyad xoogan.
Laga soo bilaabo tani waxay ka imanaysaa contraindun ugu horeysay: Dhiigga aan loo isticmaali karin kuwa leh dulqaad shakhsi ah in warshad this.
Diirad gaar ah u ah isticmaalka dhuxul waa in la siiyaa kuwa ku xanuunsada cudurka macaanka, sida miro iyo miro guduud ah, heerka sonkorta waa 12% ka sarreeya caddaanka.
Qalab kale oo muhiim ah oo ah mulberry waa in, haddii ay dhacdo xad dhaaf ah, waxay keeni kartaa shuban.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dareenka u leh: isticmaalka dhuxul ee kuleylka waa in la yareeyaa badh, sababtoo ah, iftiinka qorraxda, waxay keeni kartaa wadne qabad. Tani waxay si gaar ah u tahay raaxeysiga madadaalada, halkaas oo bukaa badanaa lagu iibiyo xeebaha.
Cun cunno caafimaad leh oo keliya, si sax ah u samee oo raaxaysato, ka dibna sida berry sida mulberry sida aad kuugu farxi lahayd sifooyinka caafimaadka leh iyo dhadhan fiican leh.